အဇ္ဈတ္တမှာ ခိုဝင်နေတဲ့ အမှန်တရား | mg naing naing
designernka / March 23, 2017	စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်။
ကျွန်တော့်အမေရဲ့ ဓာတ်ပြားဟောင်းကြီးစဖွင့်လိုက်တော့မှ ကျူရှင် သွားရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဆိုတာ အသိဝင်လာသည်။ ကြည့်လျက်စတရုတ် မင်းသားဂျက်ကီးချန်းရဲ့ ဇာတ်ကားကိုပိတ်ပြီးတီဗွီကြည့်တဲ့အစီအစဉ်ကိုခေတ္တရပ်နားလိုက်သည်။ ဒီနေ့ကျူရှင်မှာသင်မယ့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအချိန်ဇယား ကြည့်ပြီးလိုအပ်သမျှ သင်ရိုးစာအုပ်များကိုလွယ်အိတ်ထဲထိုးသိပ်ထည့်ကာ ကျူရှင်သွားဖို့ အိမ်ရှေ့လမ်းမပေါ်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ လမ်းမပေါ်မပြောနဲ့ အိမ်ရှေ့အပေါက်ဝမှာပဲ ရှိသေး။ အိမ်ထဲမှ ကျွန်တော့်အမေရဲ့ ဓာတ်ပြားသံတလွင်လွင် လွင့်ထွက်လာပြန်ပြီ။
“ရေလေးဘာလေးတော့ မချိုးဘူး၊ အင်္ကျီကျတော့ မီးပူတိုက်ပြီးသားအရန်သင့်ဝတ်သွားပြန်ပြီ။ လှချင်လိုက်တာလည်းမပြောနဲ့တော့။ မျက်နှာသနပ် ခါးပေါင်သေးကြောင်းနဲ့ကောင်”တ
သိတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုဒီလိုပြောမယ်ဆိုတာသိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမေ့အကြောင်းသိတဲ့ ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲအပြင်ကိုသာဇွတ်ထွက် လာမိတော့တယ်။ စကားပြန်အထွန့်တက်လျှင် ခေါက်ရိုးကျိုးတဲ့စကားလုံးတွေ ထပ်ထွက်လာမယ်ဆိုတာသိနေတယ်လေ။ ဗေဒင်မေးရင်တောင် ဆန်ကုန်ဦးမယ်။ ဒါတောင် မပြီးသေးအမေ့ရဲ့ အသံပြီးတော့ အဘွားရဲ့အသံထက်ထွက် လာသေးတယ်။
“ကားလမ်းလည်း ကြည့်ကူးဦး။ ကားတွေက ရှုပ်ရှပ်နေတာနော်”
“အင်းပါ”လို့သာ ပြန်ဖြေပြီးစိတ်မပါတပါနဲ့ ကျူရှင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်တက်နေတဲ့ကျူရှင်နဲ့ ကျွန်တော့်တို့အိမ်နဲ့ကဟိုဘက်ရပ်ကွက် ဒီဘက်ရပ်ကွက်ဆိုတော့ ကျူရှင်ရှိတဲ့ ရပ်ကွက်မရောက်ခင် ကားလမ်းမကြီးနှစ်ခုနဲ့ မီးရထားလမ်းတစ်ခုကိုဖြတ်ရပါတယ်။ ပထမဖြတ်ရမယ့် ကားလမ်းမကြီးကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်အတွင်းထဲမှာပဲရှိတဲ့အပြင် ကားသွားကားလာသိပ်မရှိလှတော့ ကားလမ်းကူးရတာသိပ်စိတ်ပူစရာမလို။ နောက်တွေ့ရမယ့် လမ်းမကြီးကတော့ ရပ်ကွက်အပြင်မှာရှိနေရုံသာမကကားသွားကားလာများလွန်းတဲ့ လမ်းမကြီးဖြစ်တာကြောင့်။ နည်းနည်းတော့သတိထားရတယ်။ ၉ တန်းကျောင်းသားအရွယ် ကျွန်တော့်မှာတော့ နေ့တိုင်းဒီလမ်းမကြီးကို ဖြတ်သွားနေရတာတော့ ရိုးနေပါပြီ။
ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့တော့ ထူးထူးခြားခြား ကျွန်တော်ကျူရှင်သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လူများစည်းကားနေကြတယ်။ ဘာများဖြစ်လို့ပါ့လိမ့်ဟုသိချင်ဇောနဲ့ ဆက်လျှောက်လာရာလမ်းမကြီးဆီရောက်တော့မှာအိုလူတွေ လူတွေဆိုတာနည်းနည်းနော်နော်ကိုမဟုတ်ဘူးဗျာ။ တကယ့်ကိုအများကြီးမှ အများကြီး။ အဲဒီလူတွေအားလုံးကလည်းလမ်းမကြီးရဲ့တစ်ဖက်ဆီကိုပဲ စိတ်ဝင် တစားကြည့်နေကြတယ်။ ဒါနဲ့ ဘာများဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးစပ်စပ်စုစုနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကြည့်လိုက်မိတယ်။ ဟာဗျာ…ဟိုးခပ်ဝေးဝေးမှာ လှမ်းမြင်နေရတဲ့ လူအုပ်ကြီးရယ်၊ အဲဒီ့လူအုပ်ကြီးနဲ့အတူလမ်းမကြီးရဲ့အလယ်မှာမြင်နေရတာကသစ်ခေါက်ဆိုးနီနီရဲရဲအရောင်တွေနဲ့ ဘာတွေများလည်းလို့ သေချာကြည့်လိုက်မိတော့မှ သံဃာတော်တွေမှဗျာတကယ့်ကိုသံဃာတော်စစ်စစ်တွေဗျာ။ အများကြီးပဲ။
ကျွန်တော်လည်းဘာများဖြစ်လို့ပါလိမ့်ဟုထပ်ပြီးစပ်စုကြည့်နေလိုက် သည်။ ဒီလိုနဲ့ ဟိုးဝေးဝေးမှ ကြွချီလာတဲ့ သံဃာတွေနဲ့အတူလူအုပ်ကြီးလည်း ကျွန်တော်တို့နားကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ ကျွန်တော် ပထမဆုံးသည်းသည်းကွဲကွဲ ကြားလိုက်ရသည်။ အရပ်ရှစ်မျက်နှာသို့ မေတ္တာပို့နေသောဆရာတော်သံဃာတော်များရဲ့ အသံ၊ ပြီးတော့ ဆရာတော်သံဃာတော်များရဲ့ ဘေးမှထပ်ကြပ်မခွာလိုက်ပါလာကြသောလူအုပ်ကြီးရဲ့ မေတ္တာပို့သံ။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲထိယခုအချိန်အထိ စူးဝင်လျက်ရှိသော မေတ္တာပို့သံတွေကို ကြားယောင်နေမိပါသေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရပ်ကြည့်နေတဲ့ နေရာမှာလူကြီးလူငယ်၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေကလည်းထိုလူအုပ်ကြီးနဲ့အတူလိုက်လံမေတ္တာပို့သံများ ကျွန်တော် စကြားရပါတော့တယ်။ ကျွန်တော် တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ မြင်ကွင်း၊ ကျွန်တော် တစ်ခါမှမကြားဘူးတဲ့ လူအုပ်ထုကြီးရဲ့ မေတ္တာပို့သံ၊ သံဃာတော်တွေရဲ့ မေတ္တာပို့သံတွေကြားမှာ ကျွန်တော်လို ၉ တန်းကျောင်းသားအရွယ် ကလေးတစ်ယောက်မှာအံ့သြမှု၊ ထိပ်လန့်မှု၊ စိတ်ဝင်စားမှုတွေနဲ့အတူအဲဒီလူအုပ်ကြီးထဲစိတ်ဘယ်လောက် ၀င်စားသည်မသိ။ ကျူရှင်သွားရမယ်ဆိုတဲ့အသိက ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ဖြစ်နေမိပါတယ်။ထိုအချိန်မှာ ကျွန်တော့်ပခုံးကိုလာပုတ်တဲ့ အသက်လေးဆယ်ခန့်ဦးလေးကြီးတစ်ယောက်။ ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်ထဲက ကျွန်တော့်နဲ့မျက်မှန်းတန်းမိနေသောဦးလေးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဦးလေးကြီးက-
“ချာတိတ် မင်းဘာလုပ်နေတာလဲ။ ရပ်ကြည့်မနေနဲ့ မင်းအခုဘယ်သွားမလို့လဲ။ မင်းကျောင်းသားမဟုတ်လား။ ကျောင်းသွားစရာရှိတာသွားလေ။ ဒီနေရာမှာကလေးတွေကြာကြာနေလို့ ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ ကျောင်းသွားရင်သွား၊ မသွားရင် အိမ်ပြန်တော့ သွား…သွား”
“ဟုတ်ကဲ့ ဦး။ သားလည်းအခုကျူရှင်သွားမလို့။ မမြင်ဖူးလို့ကြည့် နေတာ”
“အေးပါ အေးပါ။ သားကျူရှင်သွားမှာမဟုတ်လား။ သွားတော့နော်”
“ဟုတ်ကဲ့”လို့ ပြောပြီး ကျွန်တော် ကျူရှင်ကိုသာခြေလမ်းသွက်သွက်ဖြင့်လျှောက်လာခဲ့သည်။ ကျူရှင်သို့ရောက်သည့်တိုင်အောင် ကျွန်တော့်ရဲ့ရင်ဘတ် တစ်ခုလုံးကတော့ ကြောက်လန့်တဲ့စိတ်ကြောင့် ခုန်နေဆဲပင်။
ကျူရှင်စာသင်ခန်းထဲရောက်လို့ ခဏနားပြီးတဲ့အခါတွင် သင်္ချာသင်မယ့်ဆရာရောက်လာပါတယ်။ ဆရာကစကြမယ်လို့ ပြောသောကြောင့် အတန်းဖော်တွေ အကုန်လုံးသင်ရိုးစာအုပ်များထုတ်ကာဆရာသင်ပြသည်ကို စိတ်ဝင်တစားလိုက်ကြည့်နေမိသည်။ ကျွန်တော့်အတန်းဖော်များအကုန်လုံးဆရာသင်ပြသည့်ကိုစိတ်ပါဝင်စားနေကြပေမဲ့ ကျွန်တော့်မှာတော့ လမ်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုဆီပဲစိတ်ရောက်နေသည်။ငါ ပြန်တဲ့အချိန်ကြရင် အလာတုန်းကလိုသံဃာတော်တွေနဲ့ လူအုပ်ကြီးကိုတွေ့ရဦးမလားမသိဘူးဆိုပြီးတစ်ယောက်တည်းစိတ်ထဲမှာ ကြိတ်တွေးနေမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း ကျူရှင်ပြန်လွှတ်ချိန် အိမ်ပြန်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ ကျွန်တော်ထင်ထားသလို ဖြစ်မလာခဲ့ပါ။ တစ်ရပ်ကွက်လုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီးနေ့ခင်းတုန်းကအဖြစ်အပျက်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ အနေအထားကိုပဲ ကြုံတွေ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်းအိမ်ရောက်ရောက်ချင်းအိမ်မှာရှိတဲ့လူကြီးများကို ကျွန်တော် ကျူရှင်သွားတုန်းက မြင်ကွင်းအကြောင်းကိုလုံးစေ့ပတ်စေ့၊ စီကာပတ်ကုံး ပြန်ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ပြန်ပြောတဲ့အခါ အိမ်ရှိလူကြီးများကတော့ စိတ်ပူကာနောက်နေ့ကျူရှင်သွားတဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်တိုင် ကျူရှင်လိုက်ပို့မယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်အေးသွားပြီးရေမိုးချိူးထမင်းစားပြီးဂိမ်းဆိုင်ကိုပြေးကာဂိမ်းခဏထိုင်ဆော့နေလိုက်သေးတယ်။ဂိမ်းဆော့ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တော့ ညရှစ်နာရီထိုးနေပြီမို့ တီဗီမှပြနေတဲ့ညရှစ် နာရီသတင်းကို လူကြီးများစိတ်ဝင်တစား ကြည့်နေကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်းဘုမသိ၊ ဘမသိနဲ့ လူကြီးများနဲ့ရောယောင်က ရှစ်နာရီသတင်းကိုထိုင်ကြည့် နေလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာစတွေ့တာပဲ။ ကျွန်တော့်အတွက် ဇဝေဇ၀ါဖြစ်စရာဖြစ် ချင်စရာတွေကိုစတွေ့တာပဲ။
သတင်းထဲမှာပြနေတာလူကြီးခုနှစ်ယောက်၊ ရှစ်ယောက်လောက်ကအသက်တော်တော်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့ ဆရာတော်သံဃာတော်ကြီးလေးငါးပါးရဲ့ရှေ့မှာဝပ်တွားပြီးဆရာတော်ကြီးများကိုလျှောက်တင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေရာလည်းရောက်ရောအိမ်ရှိလူကြီးများကတီဗွီကအသံကိုလိမ့်တိုးခိုင်းလေသည်။` ကျွန်တော်လည်းဘာဖြစ်လို့မှန်းမသိပေမဲ့ သူတို့တိုးဆိုတော့ ကျွန်တော် တီဗွီအသံကိုတိုးပေးလိုက်တယ်။ တိုးလိုက်တာမှ တကယ့်ကိုတိုးတိုးလေးပါ။ အဲဒီနောက် တီဗွီမှ တိုးညင်သာစွာထွက်ပေါ်လာသောအသံတစ်ခုက ကျွန်တော့်ကို ဇဝေဇ၀ါဖြစ်သွားစေတယ်။ ဘာတဲ့။
“အခုလိုမေတ္တာပို့စီတန်းလမ်းလျှောက်နေကြတဲ့သံဃာတော်တွေဟာတကယ့်သံဃာအစစ်တွေ မဟုတ်ပါဘူးဘုရား။ ဒီကြွချီဆန္ဒပြ ရွတ်ဖတ်နေတဲ့ သံဃာတွေဟာအရှင်ဘုရားတို့လိုဘုန်းတော်ကြီးမြတ်လှတဲ့ သံဃာတော်တွေရဲ့ သိက္ခာတော်ကိုညစ်နွမ်းထိခိုက်စေတဲ့ သက္ကင်္န်းခြုံလွှမ်းထားတဲ့ သံဃာတု၊ သံဃာယောင်များပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။ ဒါကြောင့် ဒီအယောင်ဆောင်ထားတဲ့ သံဃာတော်တွေကို ၀ိနည်းတော်နဲ့အညီ အရေးယူပေးစေချင်ပါတယ် ဘုရား”ဟုလျှောက်တင်သံကိုတိုးတိတ်စွာ ကြားလိုက်ရပါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာတော့ အတွေးတွေကမွန်းကြပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်းဘေးမှာရှိတဲ့ လူကြီးတွေကိုမေးကြည့်မိပါတယ်။
“သားတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဆရာတော်သံဃာတော်တွေဟာတကယ်ပဲသံဃာအတုယောင်တွေလား”လို့ မေးခဲ့ပေမဲ့ ဘယ်သူကမှ ကျွန်တော့်ကိုအဖြေပြန်မပေးတဲ့အပြင်-
“ဟဲ့ ကလေး။ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တာကိုမစပ်စုနဲ့ တိတ်တိတ်နေစမ်း။ ကလေးကကလေးလိုမနေဘူး”ဟူ၍ပင် အငေါက်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။
ဒါဟာ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာတကယ့်ကိုဒွိဟဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အတွေးတွေကလည်းတကယ့်ကိုမွန်းကြပ်လွန်းလှတယ်။ ဘယ်အရာကအမှန်တရားလဲမသိ။ ကျွန်တော် သိပ်သိချင်တဲ့ အမှန်တရားကဘယ်အရာလဲဆိုတာကိုလည်း ကျွန်တော် မသိ။ ဒီလိုမသိချင်းများစွာနဲ့ပဲ ကျွန်တော်ဟာ အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရတာပေါ့။ အဲဒီ့နေ့ညမှာ ကျွန်တော် အိပ်မက်တစ်ခုမက်ခဲ့တယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာတော့…
“အရှေ့ရပ်၌ ရှိသောအနန္တစကြာဝဌာ အနန္တသတ္တဝါတို့
အနောက်ရပ်၌ ရှိသောအနန္တစကြာဝဌာ အနန္တသတ္တဝါတို့
Share this:TwitterFacebookGoogleLike this:Like Loading...	March 23, 2017 in Stories. Related posts
← ကျွန်တော်နှင့် . . .	ကြှနျတျောတို့မှာ အိပျမကျတှေ ရှိပါတယျ →